Event Archives - Toyota Aye and Sons
February 27, 2020 /0 Comments/in Event, News /by nyanlynn
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/02/t1.png 450 462 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2020-02-27 04:19:372020-02-27 15:46:05Yangon International Motor Show 2020
Toyota Majesty Car Launch Road Show
September 19, 2019 /0 Comments/in Event, News /by nyanlynn
“Toyota Aye and Sons မှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Junction Square Roadshow မှာ ရရှိနိုင်မည့် Special Promotion များကို ကြော်ငြာပေးလိုက်ရပါရစေ”
Junction Square မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမည့် Toyota Majesty Car Launch Road Show မှာ အခြားToyota Brand New ကားများပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး အထူးpromotion များလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Promotion များ ကတော့…..
• 10% downpayment
• 1 year free maintenance
• 10%-15% discount for 3M Window Film
• Free credit card for HP Customers စတာတွေဖြစ်ပြီး
မအားလပ် လို့ Show room သို့ မလာရောက်နိုင်သူများအတွက် လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ပွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်လို့ Promotion တွေကို လက်မလွတ်စေဖို့ ဆက်ဆက် လာရောက် ကြည့်ရှူ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
အမှတ် ၈၇ (က) ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း။Toyota Aye and Sons Showroom ၊ ပုလဲကွန်ဒိုအနီး ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
Toyota Aye and Sons ဖုန်းနံပါတ် 01 540740, 01 400950 နဲ့ 01 502206 လိုင်းခွဲ နံပါတ် (101) ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
www.toyota-ayeandsons.com မှာလဲ အသေးစိတ်အချက်အလတ်နဲ့ ကားပုံများကိုလဲ ကြည့်ရူနိုင်ပါတယ်။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/09/mm-edit.png 450 450 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2019-09-19 03:44:342019-09-19 04:06:13Toyota Majesty Car Launch Road Show
Auto Auction Fair
August 15, 2019 /0 Comments/in Event /by nyanlynn
Toyota Aye and Sons Auction Event – 2019
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/08/aution.png 450 450 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2019-08-15 06:55:322019-08-15 06:57:39Auto Auction Fair
August 14, 2019 /0 Comments/in Event /by nyanlynn
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/08/960-px-7.jpg 450 450 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2019-08-14 14:32:192019-08-14 14:37:59SUV Show
August 5, 2019 /0 Comments/in Event, News /by nyanlynn
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/08/hom-1.png 450 450 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2019-08-05 06:41:332019-08-06 04:37:00Auto Auction
23rd Anniversary Dinner Party
July 25, 2019 /0 Comments/in Event, News /by nyanlynn
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/07/dinner-Copy.png 450 450 nyanlynn http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png nyanlynn2019-07-25 09:49:162019-08-06 04:38:3623rd Anniversary Dinner Party
All New Hiace GL Launch at Myanmar Plaza Outdoor Area
May 15, 2019 /0 Comments/in Event /by soehtut aung
Toyota ကားချစ်သူများအတွက် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနဲ့ထပ်မံ ပုံဖော်ထားသော Toyota Hiace 2019 model ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ***
Toyota Hiace 2019 model ကို auto နှင့် manual ဂီယာ၂မျိုးဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး diesel (1GD-FTV)engine အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Engine power ကတော့ 2.8 L ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့ manual အတွက် USD (43,900) နှင့် auto အတွက် USD (44,900) ဖြစ်ပါတယ်။
Toyota Hiace 2019 model ကို ကနဦး ၁၅% ပေးချေပြီး ၅ နှစ်အရစ်ကျစနစ် နဲ့လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Toyota Hiace 2019 model ကို Toyota Aye and Sons showroom ၌ လာရောက်ကြည့်ရူ့နိုင်တဲ့အပြင် လာမဲ့ မေလ(၁၇)ရက်နေ့ မှ (၁၉)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမဲ့ Myanmar Plaza Road Show မှာလည်း လာရောက်ကြည့်ရူ့ရင်းနဲ့ စမ်းသပ်မောင်းနိုင်တဲ့ Test Drive အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်လို့ လာရောက်ကြည့်ရူ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက လိပ်စာ – No.(87 A)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ပုလဲကွန်ဒိုရှေ့  Toyota Aye and Sons ဖုန်းနံပါတ် 01 540740, 01 400950 နဲ့ 01 502206 လိုင်းခွဲ နံပါတ် 101 (သို့) အော်ပရေတာ နံပါတ် 111 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် www.toyota-ayeandsons.com မှာလဲ အသေးစိတ်အချက်အလတ်နဲ့ ကားပုံများကိုလဲ ကြည့်ရူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2019/05/60290813_2238279696252691_8634801632850214912_n.jpg 800 800 soehtut aung http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png soehtut aung2019-05-15 07:25:092019-05-16 09:47:09All New Hiace GL Launch at Myanmar Plaza Outdoor Area
October 18, 2018 /1 Comment/in Event /by soehtut aung
Toyota Aye and Sons Roadshow ကို လာမယ့် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် ကား ချက်ချင်းဝယ်၊ချက်ချင်းရမယ့် အစီအစဉ်…
အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်နေ့နဲ့ (၂၁)ရက်နေ့ မြန်မာပလာဇာမှာ ကျင်းပမယ့် Roadshow လေးမှာဆိုရင် Innova ကားအပြင် Fortuner ၊ Avanza နဲ့ Vios ကားမော်ဒယ်များပါ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြပွဲရက်အတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဝယ်တာနဲ့ ချက်ချင်းရမှာနော်!
ဒါ့ကြောင့် Roadshow ကို လာရောက်လေ့လာရင်း မိမိစိတ်ကြိုက် ကားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2018/10/1111.png 450 450 soehtut aung http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png soehtut aung2018-10-18 12:21:482019-08-06 06:37:10Innova Launch
June 26, 2018 /0 Comments/in Event /by soehtut aung
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတယ့် TOYOTA SUV ကားအသစ်ကြီး Rush ကို အခုလာမယ့် ဇွန်လ 29/30 နှင့် ဇွန်လိုင် 1 ရက်နေ့ တွင် Myanmar Plaza ရှိ Promotion Area မှာမိတ်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် Hire Purchase/ Trade In စတယ့် အကြောင်းအရာများကို TOYOTA Aye & Sons ၏ ဝန်ထမ်းများမှ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ TOYOTA ကားချစ်သူများကို လာရောက်လေ့လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ TOYOTA Aye & Sons မှဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်TOYOTA Aye & Sons မှ ကားများကိုလည်း 20% Cash Down payment ပြုလုပ်ရုံဖြင့် ၅ နှစ်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
ဖုန်းနံပါတ် 099 5440 0950၊ 099 5450 2206၊ 01 400 950၊ 01 502 206၊ 01 540 740၊ 01 546 546 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2018/06/rush.png 449 454 soehtut aung http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png soehtut aung2018-06-26 13:41:312019-08-06 06:42:01Rush Roadshow
Toyota Aye & Sons Roadshow at Myanmar Plaza
May 3, 2018 /0 Comments/in Event /by soehtut aung
TOYOTA ကားသစ်တွေကို စုံစုံလင်လင်ကြည့်ရူနိုင်ပြီး TOYOTA ကားသစ်တစ်စီးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့် Toyota Aye and Sons Road Show
TOYOTA ကားသစ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာစုံစုံလင်လင်ကြည့်ရူနိုင်မယ့် Toyota Aye and Sons Road Show ကို Mayလ (၄၊၅၊၆)ရက်နေ့ တွေမှာ Myanmar Plaza မှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။TOYOTA ချစ်သူတွေအတွက် (၇) ယောက်စီး MPV အမျိုးအစား TOYOTA ကားသစ်တစ်စီးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အခြား TOYOTA ကားအမျိုးအစားများဖြစ်တဲ့ Vios, Camry, Fortuner, Landcrusier ကားများအပြင်လုပ်ငန်းသုံးအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ Hiace Luxury, Hilux Revo Extra Cab, Hilux Revo Double Cab ကားအမျိုးအစားတွေကိုပါ ပြသရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Assessment Rating Results အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Road Show နေ့မှာ ကားဝယ်ယူသူ Customers များကို ၁၀သိန်းတန်အထိတန်ဖိုးရှိ ဆီဘောက်ချာကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသွားမည့်အပြင် အခြားလက်ဆောင်များလည်းပေးသွားမှာပါ။ ကားနဲ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကို Toyota Aye and Sons ၀န်ထမ်းများမှ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မည်သူမဆိုလာရောက်လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sales and Services Promotion အစီအစဉ်တွေ ၊ Unplugged Show အစီအစဉ်တွေအပြင် မြန်မာပြည်သိန်းတန်ရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်တွေပါ ပါဝင်လို့ TOYOTA ချစ်သူတွေအားလုံးကို ဆက်ဆက်လာခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Toyota Aye and Sonsမှာ ကားတန်ဖိုးရဲ့ ၃၀% ကိုပေးပြီး ၁နှစ် မှ ၅နှစ်အထိ အရစ်ကျငွေပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်များနဲ့ပါ Toyota Aye and Sonsမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်။Toyota Aye and Sons မှာမည်သည့်ကားအမျိုးအစားကိုမဆိုဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော တစ်ပတ်ရစ်ကားများဖြင့်ပါ လဲလှယ်နိုင်သောToyota Aye & Sons ၏ Assessment Trade In Scheme အစီအစဉ်အပြင်ကားတန်ဖို့ 30%ပေးသွင်းပြီး အရစ်ကျငွေပေးချေခြင်းများပြုလုပ်ပြီး Toyota Aye and Sonsမှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက လိပ်စာ – ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ပုလဲကွန်ဒိုရှေ့  Toyota Aye and Sons ဖုန်းနံပါတ် – 09954400950, 09954502206, 01 400950 နဲ့ 01 502206ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2018/05/31543217_1696711187076214_6017871294823923712_n.jpg 941 960 soehtut aung http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2020/01/TOYOTA-AYE-AND-SONS-New-LOGO-1.png soehtut aung2018-05-03 17:45:462018-05-03 17:45:46Toyota Aye & Sons Roadshow at Myanmar Plaza
Yangon International Motor Show 2020February 27, 2020 - 4:19 am
Toyota Majesty Car Launch Road ShowSeptember 19, 2019 - 3:44 am
Auto AuctionAugust 5, 2019 - 6:41 am
23rd Anniversary Dinner PartyJuly 25, 2019 - 9:49 am